privacy ကိုမူဝါဒက - Djs, Vjs များအတွက် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, နိုက်ကလပ် 2019
အများဆုံးက်ဘ်ဆိုက်အော်ပရေတာလိုပဲ, NYECountdown, LLC, ( "NYECOUNTDOWN, LLC"), ကို web browser များနှင့်ဆာဗာကိုပုံမှန်အားဖြင့် site ကိုရည်ညွှန်းပြီး, ထိုကဲ့သို့သော browser ကိုအမျိုးအစား, ဘာသာစကား preference ကိုအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါစေသောမျိုး Non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းလျက်, တစ်ဦးချင်းစီဧည့်တောင်းဆိုမှုကို၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်။ NYECOUNTDOWN non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းအတွက် LLC ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပိုကောင်း NYECOUNTDOWN, LLC ရဲ့ဧည့်သည်များကသူ့ရဲ့ website မှာအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုမည်သို့နားလည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အခြိနျမှနျမှ, NYECOUNTDOWN, LLC က၎င်း၏က်ဘ်ဆိုက်များ၏အသုံးပြုမှုအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်ကအစီရင်ခံစာထုတ်ဝေအသုံးပြုပုံဥပမာ, အအစုလိုက် Non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ NYECOUNTDOWN, LLC လည်းအသုံးပြုသူများကိုနှင့် WordPress.com ဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်မှတ်ချက်များထွက်ခွာအသုံးပြုသူများအတွက် Logged များအတွက် Internet Protocol (IP) လိပ်စာများတူသောအလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း။ NYECOUNTDOWN, LLC သာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကြောင့်ဘလော့ဂ်မှတ်ချက်ပေးသူက IP လိပ်စာများနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများ မှလွဲ. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တွေ့ရမှာပါသောတူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင်သုံးစွဲသူနဲ့မှတ်ချက်ပေး IP လိပ်စာများ logged in ဝင်သောတွေ့ရမှာပါမြင်နိုင်ဖြစ်ကြပြီးရှိရာဘလော့ဂ်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှထုတ်ဖော် မှတ်ချက်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
စာရင်းပေးသွင်းသူ Accounts ကို
subscribers သူတို့၏အကောင့်နဲ့ပြသနိုင်သည့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်, ရိုက်ထည့်ရန်, အားပေးအားမြှောက်, ဒါပေမယ့်မလိုအပ်ပါ။ လက်ရှိတွင်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းသွင်းကွန်ရက်သင်၏ "အမည်ဝှက်" နဲ့သငျသညျတည်ရှိသည်ထားတဲ့အတွက်မြို့အတွင်းပြသပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏တည်နေရာသတင်းအချက်အလက်ပြသကြချင်ကြပါဘူး အကယ်. သင်သည်သင်၏ကြေးပေးသွင်းသတင်းအချက်အလက်များပုံစံဖြည့်စွက်သည့်အခါ, ကမဝင်နိုင်ပါဘူး။
NYECOUNTDOWN, LLC 13 အောက်မှာအထူးသဖြင့်သူတို့က, သား၏အ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော NYECOUNTDOWN အဖြစ်, LLC သူတို့ရဲ့ကလေးသို့မဟုတ်သားသမီးရဲ့အွန်လိုင်း browsing နဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူတက်ကြွစွာပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်မိဘများနှင့်အုပ်ထိန်းသူများအားပေး။ NYECOUNTDOWN, LLC ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအရွယ်မရောက်သေးသူထံမှသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းမထားဘူး။ ထို့အပွငျ NYECOUNTDOWN, LLC ကလေးများရန်၎င်း၏ဆိုက်ကိုပစ်မှတ်ထားမထားဘူး။
အဆိုပါဆိုက်ကိုတတိယအုပ်စုတွေက operated NYECOUNTDOWN, LLC သို့မဟုတ်ယင်း၏ affiliates အားဖြင့် operated စေခြင်းငှါအချို့အရာ၏အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်တည်နေရာမှလင့်များနှင့်အခြားသူများပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားလင့်များကိုသင်အဆင်ပြေရုံမျှသာဖြစ်ကြ၏။ ကျနော်တို့ကတခြားဆိုဒ်များတွင်သတင်းအချက်အလက်များပြန်လည်သုံးသပ်ကြပြီမဟုတ်။ ကျနော်တို့ကိုအခြားက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အခြားက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့စေခြင်းငှါမဆိုကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ content များအတွက်တာဝန်ရှိနေကြသည်မဟုတ်။ အခြားသော website တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာအဲဒီလိုအဖြစ်ထို့ကြောင့်သင်, သတိထားလေ့ကျင့်ခန်းသငျ့သညျ။ NYECOUNTDOWN, LLC ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတင်ပြမတိုင်မီမည်သည့် web site ကို၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမူဝါဒပြန်သုံးသပ်ရန်သင့်အားအားပေး။
NYECOUNTDOWN, LLC တတိယပါတီအကြွေးန်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ်တစ်ဦးကို PayPal, Inc ကိုအသုံးပြုသည်။ NYECOUNTDOWN, LLC က၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု subscription ကိုဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအကြွေးသတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်မထားဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, NYECOUNTDOWN, LLC အကြွေးသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုတာဝန်မယူပါ။
NYECOUNTDOWN, LLC က၎င်း၏အသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းထံမှ Anonymous သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်, Google Analytics မှအသုံးချနှင့်၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှဧည့်သည်များ၏အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. စာရင်းဇယားစုဆောင်းလိမ့်မည်။ NYECOUNTDOWN, LLC လူသိရှင်ကြားဤအချက်အလက်ဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်အခြားသူများကပေးလိမ့်မည်။ သို့သော် NYECOUNTDOWN, LLC အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်မထားဘူး။
: NYECOUNTDOWN, LLC သာယင်း၏န်ထမ်း, ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏သူတို့အားအလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်တွေ့ရမှာပါ
• NYECOUNTDOWN, LLC ရဲ့ကိုယ်စား၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ် NYECOUNTDOWN မှာရရှိနိုင်န်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါ, LLC ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်
သူတို့အားန်ထမ်း, ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏အချို့သင့်အိမ်တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာတည်ရှိစေခြင်းငှါ, NYECOUNTDOWN, LLC ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. , သငျသညျထိုသူတို့အားထိုကဲ့သို့သတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းရန်သဘောတူသည်။ NYECOUNTDOWN, LLC မည်သူမဆိုဖို့အလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ငှားရမ်းသို့မဟုတ်ရောင်းချရန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယင်း၏န်ထမ်း, ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများဖို့ထက်အခြားအထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, NYECOUNTDOWN, LLC တစ်ခုသာဆင့်ခေါ်စာ, တရားရုံးအမိန့်များသို့မဟုတ်အခြားအစိုးရမဟုတ်သောတောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်အလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်တွေ့ရမှာပါ, ဒါမှမဟုတ် NYECOUNTDOWN, LLC ကောင်းသောယုံကြည်သောအခါ, ထုတ်ဖော် NYECOUNTDOWN, LLC, တတိယပါတီများမှသို့မဟုတ်ကြီးမားသောမှာအများပြည်သူများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ပေးရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လိုအပ်သောယုံကြည်ခြင်းသည်။ သင်တစ်ဦး NYECOUNTDOWN, LLC က်ဘ်ဆိုက်၏မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူဖြစ်ကြပြီးသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပေးထားကြလျှင်, NYECOUNTDOWN, LLC ရံဖန်ရံခါသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုမြှူဆွယ်တောင်းခံအသစ် features တွေအကြောင်းကိုပြောပြရန်အီးမေးလ်ပေးပို့, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အပေါ်င့်အဘယျသို့နှင့်အတူယနေ့အထိသင်တက်ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ NYECOUNTDOWN, LLC နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ။ ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ဒီ type ဆကျသှယျဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းဘလော့ဂ်များကိုသုံးပါ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအနည်းဆုံးအီးမေးလ်ဤအမျိုးအစားကိုစောင့်ရှောက်ရန်မျှော်လင့်ထား။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုတောင်းဆိုမှု (ဥပမာတစ်ထောကျပံ့အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများတဦးမှတဆင့်) ကိုပေးပို့လျှင်, ငါတို့သည်ရှင်းလင်းသို့မဟုတ်သင့်တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအခြားအသုံးပြုသူများကိုထောကျပံ့ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ထုတ်ဝေခွင့်ရှိသည်။ NYECOUNTDOWN, LLC သတင်းအချက်အလက်အလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်များ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်, အသုံးပြုခြင်း, အပြောင်းအလဲတချို့သို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လိုအပ်သောအားလုံးအစီအမံကြာပါသည်။
တစ်ဦးက cookie ကိုတစ်ဦးဧည့်သည်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ website တစ်ခုစတိုးဆိုင်များကြောင်းအချက်အလက်များ၏ string ကိုဖြစ်ပြီး, ဧည့်သည်ရဲ့ browser ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ရန်ဧည့်သည်ကို return တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း။ NYECOUNTDOWN, LLC, NYECOUNTDOWN, LLC ဧည့်သည်များဖော်ထုတ်ခြေရာခံကိုကူညီ NYECOUNTDOWN, LLC က်ဘ်ဆိုက်၏သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှု, သူတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်အကြိုက်များကို cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် cookies များကို NYECOUNTDOWN, LLC ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များအချို့ features တွေ cookies တွေကို၏အကူအညီမပါဘဲကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ၎င်းအားနည်းချက်နှင့်အတူ NYECOUNTDOWN, LLC ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. မတိုင်မီ cookies တွေကိုငြင်းဆန်ဖို့သူတို့ရဲ့ browser များသတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူးသူကို NYECOUNTDOWN, LLC ဧည့်သည်။ NYECOUNTDOWN, LLC / တောင်းဆိုမှုများကျေးရွာအုပ်စုပါဘူးဂုဏ်အသရေကိုမမည်။
NYECOUNTDOWN, LLC, ဒါမှမဟုတ်သိသိသာသာအားလုံး၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှု, NYECOUNTDOWN, LLC လုပ်ငန်းထွက်ဝင်သို့မဟုတ်ဒေဝါလီဝင်ကြောင်းဝယ်ယူဒါမှမဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ရပ်အတွက်ကြသည်မှန်လျှင်, အသုံးပြုသူသတင်းအချက်အလက်တတိယပါတီလွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောလွှဲပြောင်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဝန်ခံနှင့် NYECOUNTDOWN, LLC မဆိုရယူဤမူဝါဒအတွက်ထွက် set အဖြစ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါစသော။
ရံဖန်ရံခါ NYECOUNTDOWN, LLC ကိုသင်အီလက်ထရောနစ်သတင်းလွှာ, ကြေငြာချက်များ, စာသားများ (SMS) စစ်တမ်းများသို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်အလိုအလျောက်ဖြစ်စဉ်ကိုမှတဆင့်သင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုပေမည်။ သင်တို့သည်ဤဆက်သွယ်ရေး၏မည်သည့်သို့မဟုတ်အားလုံးကိုလက်ခံရရှိဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့ဆိုရင်အီလက်ထရောနစ်သတင်းလွှာများနှင့်ကြေညာချက်များအတွင်းပေးလမ်းညွန်အောက်ပါ, ဒါမှမဟုတ် support@nyecountdown.com အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်ဖယ်ထုတ်စေခြင်းငှါသင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒမဆိုစာရင်းချွတ်ခံရဖို့ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြညွှန်း NYECOUNTDOWN ကနေ, LLC ရဲ့န်ဆောင်မှု။ စာသား (SMS) ဘေးဖယ်တနေရာပဲ "ဖယ်ရှားရေး" နဲ့ပြန်ဖြေတယ်။
NYECOUNTDOWN တှငျတှေ့အဖြစ်ဒီသီးခွားမူဝါဒသူတို့သက်ဆိုင်သောများမှာ insofar အဖြစ်နှင့်ဥပဒေကခွင့်ပြုသော insofar အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၏ LLC ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, တာဝန်ယူမှုအပေါ်တူညီသောအကြောင်းသတိပြုစရာများနှင့်ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်ခံရကြလိမ့်မည်။
သုံးစွဲမှု NYECOUNTDOWN, LLC ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာတွေ့ရှိအတိုင်းဤ privacy ကိုမူဝါဒကဥပဒေဖြင့်ခွင့်ပြုအဖြစ်သူတို့အားအသုံးအနှုန်းများသက်ဆိုင်သောနှင့် insofar များမှာ insofar ကဲ့သို့တူညီသောအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေနှင့်သီးသန့်နေရာအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ခံရကြလိမ့်မည်။